SomaliTalk.com » SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii| Casharkii V-aad
SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii| Casharkii V-aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Tuesday, July 19, 2011 // Jawaabaha waa la xiray
Guddoomiyihii Talyaaniga ee fashiistiga ahaa (Cesare Maria De Vecchi), dib uma uusan dhigan in uu soo saaro xeerar uu ku adkeynayay maamulkiisa gumeysiga ah. Mid kamid ah xeerarkaas wuxuu ahaa qaanuun uu hubka kaga dhigayo qof kasta oo Soomaali ah. Waxay ahayd xilli laga soo baxay dagaalkii I-aad ee dunida. Ummadihii uu dagaalku qabsadey dhulkooda, geerida iyo bur-burka badan ka sokow, waxay ka dhaxleen hub fara-badan oo ku baahsan gobolladii dhulkooda. Soomaaliya waxay kamid ahayd ummadahaas uu dhulkoodu dagaalku heley. Waxaa u weheliya dagaallo ka horeeyey dagaal-waynaha iyo dagaallo ka danbeeyey ee gobollada Soomaaliya ay ahaayeen fagaaraha lagu hardamayay.
Soomaaliya, gobollada uu hubku sida xooggan ugu baahsnaa waxay ahaayeen gobolladii uu Talyaanigu doonayay in uu gumeysto. Inkasta oo dadka Soomaalida ah ayan xilligaas diyaar u ahayn in ay wareejiyaan xoogaaga yar ee hubka ah ee gacanta ugu jiray, misana hubkaas maahayn mid ay iskaga difaaci karayeeyn xoogga ciidamada Talyaaniga. Taasi waxay dhalisey gadoodkii ugu horeeyey ee Soomaalidu ay ku diidayeen xeerkan. Taasi waxay ahayd diidmo ka timid bulsho Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta dhulka uu maro webiga Shabeelle. Ninka horseedey diidmadaas wuxuu ahaa Shiikh Xasan Barsane Nuur. Isagu wuxuu ahaa shiikh raacsan dariiqada Axmadiya, kaas oo si xooggan looga xushmeyn jiray degaanka uu ku noolaa.
Cesare Maria De Vecchi, dhambaal qoraal ah ayuu u direy Shiikh Xasan Barsane. Isagu wuxuu ka dalbadey in uu hubka ka dhigo xertiisa iyo qabaa’ilka raacsan. Waxaa kaloo uu ka dalbadey in dadkaasi ay u hoggaansamaan maamulka cusub ee ka curtey koonfurta Soomaaliya. Xilligaas waxaa jiray qoryo tiradoodu lagu qiyaasey 1.600 iyo rasaas badan, kuwaas oo gacanta ugu jiray qabiilka uu Shiikhu ka dhashay iyo qaar kamid ah beelaha ay duddo wadaagta yihiin. Shiikh Xasan Barsane, intuusan ka jawaabin dalabkii De Vecchi, wuxuu fadhi u qabtey beelihii ku dhaqnaa degmooyinka u dhowaa. Waxaa kamid ahaa Jiliyaale, Ceel-dheere, Buur-gooyo, iyo Afgooye. Dadkii ka yimid degaamadaas, dhamaantood waxay Shiikha kula ballameen in ay garab-joogsadaan qadiyaddiisa.
Shiikh Xasan Barsane Nuur, wuxuu markaas noqdey nin u sharaxan gadood uu kaga hor-tegayo maamul ka xoog wayn oo uusan ciirsi u heysan. Shiikhu wuxuu si gaar ah u diidey in uu hubka dhiibo, kaas oo ahaa qodobkii ugu horeeyey ee laga dalbey. Islamarkaas wuxuu si guud u diidey xeerka uu gumeysiga la doonayo in uu ku dhaqo degaanka. Dhambaal jawaab ah ayuu Shiikh Xasan uu u direy De Vecchi. Qoraalkii dhambaalka waxaa kamid ahaa sidan:
“ Waxaan ku bilaabanayaa magaca Eebaha leh naxariista guud iyo midda gaar. Waraaqdaadii waan heley, wixii ku qornaana waan fahmey. Laakiin waa in aan kuu sheegaa in annagu aynaan u hoggaansameyn amaradiina, islamarkaasna ayan suuragal ahayn in annaga iyo idinka aanu is-bahaysano. ……………….. Dowladdaadu waxay leedahay xeerkeeda, annaguna waxaanu leenahay xeerkayaga. Sidaa darteed annagu aqbali-meyno xeer aanan ahayn kaayaga. Xeerkayagu waa kii Eebe iyo kii adeegihiisii suubanaa (shacni iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee). Annagu ma nihin sida dadka (soomaalida) kale. Nin naga mid ah ma dhicin in uu qortey ciidamada Zaptiè. Weligeed ma-dhicin. Haddiise aad inoo timaaddo si aad inoola dirirto, wax kasta oo suuragal ah ayaanu kugula dagaalameynaa. ………………… Ma aanu dooneyno in aanu adduunkaan joogno, bal waxaa inoo wanaagsan in aanu dhimano annaga oo u dagaalameyna difaaca xeerarkayaga “. (http://somaliswisstv.com/2008/07/11/who-was-sheikh-hassan-barsane).
Sida aanu soo sheegney De Vecchi wuxuu ahaa dhiigya-cab fashiiste ah. Si uu u meel-mariyo maamulkiisa fashiistiga ah, wuxuu ahaa nin u muhoonaya dilka dadka uu ka itaalka roon yahay. De Vecchi wuxuu guddoonsadey, Shiikh Xasan Barsane iyo dadka raacsan in uu ku bixiyo xoog ayan maaro u heleyn, si uu uga hor-tago gadoodka uu Shiikh Xasan qorsheynayo. Islamarkaas ay dersi ugu noqoto Soomaali kasta oo kale oo hor-joogsada mashruuca gumeynta. 29/ 3- 1924-kii, ciidamadii Talyaaniga waxay ku baxeen degaankii ay weerarka ugu socdeen. Xoogga ay ku weerartameen wuxuu gaarsiisnaa 800 oo nin.
” Waxaa ciidankaas kaalinayay laba horin oo ku hubeysan qoryaha daran-dooriga u dhaca iyo laba madfac. Talyaanigu wuxuu ciidankaas ku weeraray tuulooyinkii kacaamay. Dagaal kulul oo saddex maalmood socdey wuxuu sababay in tuulooyinkii dhamaantood uu dab ka huriyo. Dabadeedna uu dadkii gumaado “. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 90, Muqdishow – Soomaaliya).
Muddadii u dhexeysey 29-kii – 31-kii bishii maarso 1924-kii, xooggii Talyaaniga wuxuu jebiyay Soomaalidii. Sida u caadada ahayd xoog walba oo gumeyste ah, ciidamadii weerarka ahaa, waxay gubeen aqalladii ka dhisnaa tuulooyinka iyo wixii agab ahaa oo ay dadku adeegsanayeen. Waxay gubeen beerihii, xoolihiina waa ay laayeen. Islamarkaas waxay gacanta ku dhigeen raggii gadoodka hor-kacayay oo uu kamid ahaa Shiikh Xasan Barsane. Halkii ayaa xabsiga loogu taxaabay, Shiikhii iyo saaxiibadiis. Dhowr bilood dabadeed, Xamar ayaa maxkamad lagu saarey. Bishii julay 1924-kii, Shiikh Xasan waxaa lagu xukumey 30 sano oo xabsi ah. Laba sano iyo bar ayuu ku xirnaa xabsi Xamar ku yiil. Dabadeed markey taariikhdu ahayd 28/ 1- 1927-kii Shiikh Xasan Barsane ku geeryoodey xabsiga Xamar.
Talyaanigu markii uu gacanta ku dhigey gobolka Shabeellada Hoose, kama uusan raagin in uu beeraley Talyaani ah keeno dalka. Islamarkaas dadkii koytada ahaa wuxuu u boobey dhulkii beeraha ku wanaagsnaa ee webiga jiinkiisa ku yiil. Soomaalidii dhulka tabcan jirtey waa uu fogeeyey oo wuxuu dejiyay meelo ka dheer webiga. Wuxuu ku khasbey in ay xoog ugu shaqeeyaan beeraleyda Talyaaniga ah. Qofkii Soomaali ah oo shaqada gumeysiga hagrada, sharcigu wuxuu ahaa in shaabuug lala dhaco. In la dilona kama duwaneyn shaabuugga lala dhacayo.
Meel kasta oo geesi ummadeed uu ka baxo, geesi kale ayaa ka curta. Inkasta oo wacyiga liita iyo kala tagsanaanta uu dabar wayn ku hayay wax-qabadkoodii, misana Soomaalidu waxay meel kasta ku muujiyeen hoggaan gunnimo in ay diidaan. Halgankoodu wuxuu ahaa mid taxan, sida ayaamuhu u taxan yihiin. Markii ciidamadii Talyaaniga xooggoodii uu u kacay in ay xoog kula wareegaan talada labadii saldanadood ee ka dhisnaa Mudug iyo Majeertiinya, waxaa gobolladii koonfureed ka bilowdey gadood kale. Inkasta oo uusan noqon mid hanaqaadey, misana wuxuu ahaa mid looga soo hor-jeedey beero-tacabka hawaanka ah ee Soomaalida lagu khasbayay. Gadoodku wuxuu bilowdey markii tuulooyinka agagaarka degmada Jannaale laga soo ururshey rag Soomaali ah, kuwaas oo tiradoodu ay gaareyso 10.000 nin. Dadkaas ayaa waxaa loo qeybiyay qoysaskii Talyaaniga ahaa ee u yimid degaanka in ay la wareegaan dhul-beeraadka. Ujeeddadu waxay ahayd in ay u shaqeeyaan jaaliyadaha caddaanka ah.
26/ 10- 1926-kii, tuulada Dibley waxaa tegey nin la yiraahdo Cabdi-raxmaan Maxamad Abiikar. Isagu wuxuu ahaa odaga beelaha reer Baraawe. Waxaa la socdey shan nin oo ka tirsan ciidanka Talyaaniga. Ujeeddadu waxay ahayd, Soomaalida uu matalayay in uu oggoleysiiyo in ay u adeegaan Talyaaniga oo ay fuliyaan howl-gallada hawaanka ah. Tuulada waxaa ku noolaa oo odey ka ahaa nin wadaad ah oo la yiraahdo Shiikh Maxamad Shiikh Cabdi. Isagu wuxuu soo dhoweeyey Nabadoon Cabdiraxmaan iyo shantii askari ee la socotey. Sida caadada Soomaalidu ay tahay, meel wanaagsan ayaa loo gogley. Dabadeed halkaas ayaa martidii lagu maamuusey. Habeennimadii goortii ay seexdeen, ayaa Shiikh Maxamad wuxuu diyaarsadey rag dhallinyaro ah oo laaya askarta iyo nabadoonka la socda. Kadib markii la laayay colkii martida ahaa, Shiikh Maxamad iyo raggiisii waxay u baxsadeen saldhig ay degganaayeen xer la oran jiray Jameecada Ceel Xaaji.
Jameecada waxaa odey ka ahaa Shiikh Cali Maxamad Nuur oo ahaa wadaad aqoon wanaagsan u lahaa diinta islaamka. Waaligii fadhiyay degmada Marka, wuxuu ahaa nin Talyaani ah. Isagu wuxuu fariin u soo direy Shiikh Cali Maxamad Nuur. Wuxuu ka codsadey in uu yimaado saldhigga biliiska degmada, si loogala hadlo shilka ka dhacay tuulada Dibley ee uu sameeyey nin ka tirsan jameecadiisa.
Shiikh Maxamad Cali waa uu diidey in uu u tago. Waayo horey ayuu shiikhu u necbaa gumeysiga iyo dhaqan xumidiisa. Wax badan ayuu xertiisa kala hadley in ay ku baraarugaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida ah. Masuulkii Talyaaniga ahaa mar kale ayuu dhambaalkii soo celiyay. Laakiin Shiikh Maxamad waxba iskama beddelin go’aankiisii ahaa diidmada. Markuu laba jeer diidey ayaa, Talyaanigii wuxuu soo direy taliyihii saldhigga biliiska, kaas oo la oran jiray Marshaallo Aldo Fiorina. Taliyaha ciidan yar ayuu horey u sii kaxeystey, si uu Shiikha u soo khasbo oo magaalada u keeno. Laakiin Shiikha iyo xertiisii diyaar ayay u ahaayeen. Dood lagama sugan taliyihii, bal isaga iyo xeyntii ciidanka ahayd ee la socotey, dhamaantood waa la laayay. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 95, Muqdishow – Soomaaliya).
Waaligii Xamar odeyga ka ahaa De Vecchi, aad ayuu uga xumaadey dilkii loo geystey sarkaalka Talyaaniga ah iyo ciidankiisii. Wuxuu Xamar ka soo direy ciidan Talyaani ah oo gaaraya 120 nin. Iyagu waxay ahaayeen ciidan loogu tala-galey in ay wax xasuuqaan. Sidaa darteed waxay wateen hub culus oo Soomaalidu ayan u babac dhigi kareyn. Ciidankaas waxaa hoggaaminayay nin la yiraahdo Dhamme Guirati. Beeraleydii Talyaaniga ee degaanka ku dhaqnaa ayaa waxaa la sii farey in tuulada Ceel Xaaji ay sii mooreeyaan. Ujeeddadu waxay ahayd in ayan cidna dibadda uga baxsan inta uu ciidanka Talyaaniga ka soo gaaraayo goobta. (Isla marjicii hore. s. 95)
30/ 10- 1926-kii, ciidankii Xamar ka yimid waxay soo gaareen tuuladii. Markiiba waa ay hareereeyeen oo waxay dadkii ka codsadeen in ay is-dhiibaan. Dumarkii iyo caruurtii waxay ku urureen masaajid ku yiil tuulada. Raggiina waa ay diideen in ay isu dhiibaan ciidanka gumeysiga. Ciidankii tuulada tegey waxay ku hor-mareen masaajidkii in ay xoog uga soo saaraan dadkii maatada ahaa. Meel ayay ku urursheen. Dabadeed tuuladii ayay galeen, laakiin waxay ka waayeen wax rag ah oo halkaas ku sugan.
Shiikh Cali Maxamad iyo 70 rag ah oo la socotey, habeen ka hor ayay ka baxeen tuulada. Dhamme Guirati, wuxuu ciidankii farey in ay tuulada bur-biriyaan. Sidii ayaa lagu gubey dhamaan guryihii tuulada Ceel Xaaji iyo agabkii u yiil dadkii dan-yarta ahaa ee Soomaaliyeed. Dabadeed ciidankii gumeysiga wuxuu ku ciil baxay maatadii tuulada oo halkii ayuu ku laayay dumarkii iyo caruurihii.
Shiikhii iyo raggii xerta ahaa ee baxsadey, waxaa laga daba-direy ciidan ay hoggaaminayaan laba sarkaal oo xiddiglayaal ah. Waxaa la kala yiraahdo Leut. Pepe iyo Leut. Blasi. 3/ 11- 1926-kii ayaa labadii ciidan waxay isku heleen tuulada Dhanaane. Afar maalmood ayaa lagu dirirayay tuulada Dhanaane. Maalintii afaraad, Talyaanigii waxay heleen ciidan xoojiya. Markaas ayaa la jebiyay Shiikhii iyo xertiisii. Talyaanigu waxay halkaas ku dileen Shiikh Maxamad Cali. Waxaa kaloo ay dileen 74 xertii shiikha ahayd. Waxay xabsiga u taxaabeen 170 qof oo kamid ah dadkii tuulada ku noolaa. Iyagana waxaa laga diley 21 nin, waxaa ka dhaawacmey 16 nin. (Isla marjicii hore. s. 95-96).
Nadaamkii De Vecchi, wuxuu banaadir kala kulmey halgamadaas teel-teelka ah oo tilmaanta u noqdey in Soomaalidu ayan si sahlan ugu oggoleyn in dhulkooda si sahal ah uu ku dhaxal-wareego. Intaas aanu xusney kuma ekeyn dhaqdhaqaaqa Soomaalida koonfureed ay ku diiddanaayeen nadaamka gumeysiga. Meeshii uu halgan ka joogsado, meel kale ayuu ka hillaacayay. Waxaa tusaale-dhig noqon kara kacdoonkii beesha Biyamaal ee ka horeeyey kacaamadan danbe, kacdoonkii beesha Wacdaan, halgankii suugaaneed ee Shiikh AxmadGabyow uu guud ahaan kula hadlayay. Laakiin midnimo la’aanta heysatey halganka ayaa waxay fursad u ahayd xoogga gumeysiga, taas oo u sahleysey in uu halgan waliba meeshiisa inta ugu tago uu kaga guuleysto. Mararka qaarna, sida aanu arki doonno xoogga Soomaalida ayuu isu adeegsanayay.
Nadaamkaas qowleysatada ah ee ka soo doolaaley koonfurta qaaradda Yurub, marka uu marba ku duulayey degaan Soomaaliyeed ee uu gumeynayay, Soomaalida gudaha ku dhaqan ee xeebaha ka fog, wacyigooda waa uu hooseeyey. Bal marar badan waxaa dhacayay in bulsho Soomaaliyeed oo gumeysigu weeraray, qeybo kale oo bulshada kamid ah ay ku farxaan. Sababtuna ay tahay qabiil. Dhaawacaas oo illaa hadda socda, ayaa wax-garadka Soomaaliyeed ay inbadan ka dhawaaqeen. Abwaan xilligaas ka Hadley dhacdo lamid ah dhacdooyinkan ayaa wuxuu tiriyey tix uu ku yiri sidan:
Masalooyinkaan oran jiraa malagyo keeneene
Dadka gabal mashxarad buu hayaa loo malqadin xeere
Maqsuud weeye maantiyo dorraad dhaantana u mirane
Weli ma-oga wuxuu maagan yahay gaalka yimid meesha
Inuu aniga gaar ii martey moodayaan weliye
Moodkiyo inuu maalka dhici ma ay maleeyaane
Haddaan hadal murtiyo maamuliyo marin cad loo yeelin
Miyirkoo ku dhererinin haddaan odayo loo miirin
Ama muranka baas iyo xumaan meesha laga saarin
Masalooyin rag maamulahayay mrugtay laabtiiye
Wuxuu moodi meeshaan ka ka-kacay maro in loo saari
Oo waa maanka laga siib isagu soo mir-kacay haatan (Nuur Cali Qonof)
Qaybaha kale ee qormadan ka akhri: http://somalitalk.com/tag/eenow/